Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.4.1 mety santionany: fanangonana antontan'isa sy ny tahirin-kevitra fanadihadiana
Mavesatra dia afaka manafoana fanolanana fanahy iniana vokatry ny santionany dingana.
Mety santionany ireo izay olona rehetra manana fantatra, tsy aotra mety ho fampidirana, ary azo inoana ny tsotra dia tsotra santionany nanaovana kisendrasendra santionany izay olona tsirairay dia manana mitovy mety ho fampidirana. Rehefa namaly ireo voafantina tsotra amin'ny alalan'ny kisendrasendra santionany amin'ny famonoana tanteraka (ohatra, tsy misy fandrakofana fahadisoana ary tsy misy tsy-valiny), dia tombany dia mahitsy, satria ny santionany dia-on eo ho eo-ho kely dikan-tenin'ny mponina.
Simple kisendrasendra loatra santionany dia ampiasaina amin'ny fomba fanao, na izany aza. Kosa, mpikaroka fanahy iniana mifidy olona tsy mitovy probabilities ny fampidirana, mba hampihenana ny vola lany ary mampitombo ny marina. Rehefa mifidy ny olona fanahy iniana ny mpikaroka amin'ny probabilities samy hafa ny fampidirana, dia fanovana no ilaina mba hanafoana ny fanolanana nateraky ny santionany dingana. Amin'ny teny hafa, ny fomba generalize avy amin'ny santionany miankina amin'ny fomba santionan no voafidy.
Ohatra, ny Current Mponina Survey (CPS) no ampiasain'ny governemanta Amerikana mba Tombanan'ny ny tahan'ny tsy fananana asa. Isam-bolana momba ny 100.000 olona nadinadinina, na face-tava, na an-telefaonina, ary ny vokatra dia ampiasaina mba hamokarana ny tahan'ny tsy fananana asa tombanana. Satria ny governemanta maniry ny Tombanan'ny ny tahan'ny tsy fananana asa eo amin'ny isaky ny fanjakana, dia tsy afaka manao tsotra kisendrasendra santionana ny olon-dehibe, satria mety fahavokarany vitsy loatra namaly ao amin'ny fanjakana amin'ny kely mponina (ohatra, Rhode Island) ary koa maro avy amin'ny fanjakana amin'ny lehibe mponina (oh , California). Kosa, ny CPS santionany amin'ny hafa ny olona samy hafa firenena amin'ny tahan'ny, ny dingana atao hoe stratified santionany amin'ny mitovy mety ny fifantenana. Ohatra, raha te 2.000 ny CPS namaly isaky ny fanjakana, dia ny olon-dehibe tao Rhode Island dia efa tokony ho in-30 avo mety ny fampidirana noho ny olon-dehibe ao California (Rhode Island: 2.000 namaly 800.000 isaky ny olon-dehibe vs California: 2.000 namaly isaky ny 30.000.000 olon-dehibe). Ho hitantsika any aoriana, io karazana santionany amin'ny mitovy mety mitranga amin'ny loharanom-baovao ety anaty aterineto ihany koa ny tahirin-kevitra, fa tsy toy ny CPS, ny santionany dia matetika rafitra tsy fantatra na fehezin'ny mpikaroka.
Noho ny santionany famolavolana, ny CPS dia tsy mivantana solontenan'ny Etazonia; izany dia ahitana loatra ny olona maro avy any Rhode Island, ary vitsy loatra avy any Kalifornia. Noho izany, dia ho fahendrena ny Tombanan'ny ny tahan'ny tsy fananana asa eto amin'ny firenena amin'ny tahan'ny tsy fananana asa eo amin'ny santionany. Raha tokony ho ny santionany midika, fa tsara ny haka zavatra mavesa-midika, izay ny vato mandrafitra ny zava-misy fa olona avy any Rhode Island dia mety ho tafiditra noho ny olona avy any Kalifornia. Ohatra, ny olona tsirairay avy any California fa ho upweighted- isaina izy ireo bebe kokoa ao amin'ny tombana-ary ny olona tsirairay avy any Rhode Island ho downweighted-izy ireo tsy isaina ao amin'ny tombana. Raha ny marina, ianao omena feo bebe kokoa ny olona fa tsy dia mety hianatra momba.
Ity kilalao lehibe ohatra mampiseho fa diso fandray matetika teboka: ny santionany dia tsy tokony ho ny kely dikan-ny mponina mba hamokatra tsara vinavina. Raha ampy no fantatra momba ny fomba ny antontan-kevitra dia voaangona, dia izay vaovao azo ampiasaina, rehefa manao tombatombana avy ny santionany. Ny fomba voalaza fotsiny aho-ary izay mamaritra kajy fanazavana fanampiny ao amin'ny teknika-mianjera mivantana ao anatin'ny rafitra kilasika mety santionany. Ankehitriny, aho haneho hevitra koa fa azo ampiharina amin'ny tsy-mety santionany.